I-Apple Watch entsha inokunceda ekunyangeni isifo seswekile | Ndisuka mac
I-Apple Watch entsha inokunceda ekunyangeni isifo seswekile
Njengesiqhelo, amahemuhemu amaninzi avela xa kungeniswa imveliso. Nangona singazi kwanto esemthethweni malunga nemihla okanye indlela iApple eza kujongana nayo nemiboniso yalo mveliso kulo nyaka, sele siqala ukuthetha ngeemodeli ezintsha ze-iPhone, njengesiqhelo, kwaye Kwakhona iApple Watch entsha.
Imodeli entsha yokubukela iya kuthi, ngokucacileyo njengenye yezinto ezintsha zokuqaqambisa, inzwa apho kujongwa khona iswekile esegazini, ukunceda abantu abaneswekile ukuba babe nolawulo olungcono kubomi babo bemihla ngemihla. Ngokwengxelo, iApple ineqela leenjineli zebhayoloji ezisebenza kule projekthi.
Olu luvo, oluvela kuSteve Jobs, owayesele ephakamisile ukubanakho kokusebenzisa iimveliso zakhe ukulawula impilo yomsebenzisi ngamnye, kuyasetyenzwa ngokufihlakeleyo ngokungqongqo kwikomkhulu le-Apple, kwiiofisi zeCupertino.
Ukuba la marhe ayinyani, i abaguli abanesifo seswekile baya kuba nethamsanqa, okoko inzwa ibandakanywe kuwotshi, iimvavanyo zegazi zokujonga imeko yeswekile esegazini ezenziwa mihla le zizakuphela. Iinjineli zebhayomedical ezisebenza kule projekthi zijolise ekuncedeni abaguli ngokuqhubeka nokubeka iliso kwiglucose.
Ingxelo apho lonke ulwazi luqokelelwa khona, iyatsho U-Apple usebenze kweli nyathelo ubuncinci iminyaka emi-5. Itekhnoloji ibandakanya izixhobo zokuziva ezinako ukulinganisa inani leswekile esegazini ngesikhumba somsebenzisi.
Ukuba ekugqibeleni sinentengiso iwotshi / isixhobo esikwaziyo ukulinganisa inani leswekile esegazini, iApple iya kuba iphumelele vula isixhobo sakho sibe yinto ebalulekileyo yezempilo kubasebenzisi abaninzi. Kuyinyani ukuba inkampani yaseNyakatho Melika inqwenela ukunika usetyenziso lwezempilo ngakumbi kwiWatch yayo ukuyenza ibeluncedo ngakumbi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Amahemuhemu » I-Apple Watch entsha inokunceda ekunyangeni isifo seswekile
Imfazwe iyonke: IWarhammer Ukuza kwiVenkile ye App ngo-Epreli 18
PHILA: Wreck, Hack, Die, Retry! I-robot shooter kunye nomdlalo wokuqhawula